Ver စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်မှုနဲ့ ခြောက်ဦးထက်မနည်း ထပ်မံဖမ်းဆီးခံရ - Series y Programas
Ver စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်မှုနဲ့ ခြောက်ဦးထက်မနည်း ထပ်မံဖမ်းဆီးခံရ
▷စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်မှုနဲ့ ခြောက်ဦးထက်မနည်း ထပ်မံဖမ်းဆီးခံရ
■ စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်း ဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့် ဧပြီလ ၂၁ ရက် မနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းကနေ ဧပြီလ ၂၂ ရက် ဒီနေ့ထိ ၂၄ နာရီအတွင်း RFA က အတည်ပြုလို့ရသမျှ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ခြောက်ဦးထက်မနည်း ဖမ်းဆီးခံ ခဲ့ရပြီး တောင်ဒဂုံက အလုပ်သမားရုံးနဲ့ မန္တလေးက အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးလည်း မီးလာင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်း စစ်တပ် နဲ့ ရဲက မြို့တော်တော်များများမှာ လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို ပိုပြီး တင်းကျပ်စစ်ဆေးလာနေပါတယ်။
RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုနေရိန်ကျော် က ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
စစ္ေကာင္စီကို ဆန႔္က်င္မႈနဲ႔ ေျခာက္ဦးထက္မနည္း ထပ္မံဖမ္းဆီးခံရ
■ စစ္တပ္နဲ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္း ဖမ္းဆီးမႈေတြေၾကာင့္ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ မေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းကေန ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ ဒီေန႔ထိ ၂၄ နာရီအတြင္း RFA က အတည္ျပဳလို႔ရသမွ် တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ ေျခာက္ဦးထက္မနည္း ဖမ္းဆီးခံ ခဲ့ရၿပီး ေတာင္ဒဂုံက အလုပ္သမား႐ုံးနဲ႔ မႏၲေလးက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးလည္း မီးလာင္ကြၽမ္းခဲ့ပါတယ္။
ဖမ္းဆီးခံရသူေတြထဲမွာ CDM လုပ္ေနတဲ့ ဆရာမနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ဆရာဝန္ေလာင္း၊ အိုင္တီပညာရွင္နဲ႔ ေရွ႕ေနေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။
ဒီရက္ပိုင္း စစ္တပ္ နဲ႔ ရဲက ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လမ္းသြားလမ္းလာေတြကို ပိုၿပီး တင္းက်ပ္စစ္ေဆးလာေနပါတယ္။
RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကိုေနရိန္ေက်ာ္ က ေျပာျပပါလိမ့္မယ္။
CANTIDAD DE VISITAS QUE TUVO EL VIDEO : 47191 PERSONAS LO VIERON
FECHA EN LA QUE SE SUBIO EL VIDEO 2021-04-22 12:29:53 📅
Abar Abar dice:
MEG GIE dice:
Nu Nu dice:
sint Tun sint Tun dice:
Hay Mar dice:
စစ်ခွေးသူတောင်းစားတွေ အမြန်ဆုံကျဆုံးပါစေ မအေလိုးစစ်ခွေးတွေ
Sawsaw aunghlaphyu dice:
ျပည္သူတို႕ေရသိျကပါ ဒါဟာအစပဲရွိေသးတယ္ ျပည္သူျငိမ္လိုက္တာနဲ႕ေခြးဆြဲသလိုဆြဲေနပါပီ ညီျကပါမျငိမ္ျကပါနဲ႕ စစ္ေခြးေတြ က တစ္အိမ္ဆင္းတအိမ္တက္ေခြးဆြဲသလိုဆြဲမွာသိျကပါ လမ္းေပၚထြက္လွဴပ္ရွားေပးျကပါအခုလိုလွူပ္ရွားေနရင္ ျပည္သူ႕အစိုးရဘက္ စစ္ေခြးေတြ မလွည့္နိုင္ပါဘူး ဒါေျကာင့္ထြက္ေပးျကပါ
pars lee dice:
Thanks so much for this news RFA.
Wai Min dice:
အထိအခိုက်နည်းပြီးပြည်သူ့တော်လှန်ရေးလဲအရှိန်မပျက်အောင်နံနက် ၉နာရီနဲ့ ၁၀ နာရီကြားညနေ ၃နာရီနဲ့၄နာရီကြား ဆိုင်ကယ် ကားဟွန်း တွေတီးကြရင်မကောင်းဘူးလား
ktowinmintxan naibg tun dice:
Sky Sky dice:
သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကို ငြိမ်းချမ်းစွာပဲဆန္ဒပြဖော်ထုတ်နေတာပါ ဟိုက
သူတို့ အာဏာလိုချင်လို့ပဲလုံးဝမတရားဘူး အာဏာပဲလိုချင်ပြီးအရည်အချင်းမှမရှိတာ
dayy logg dice:
The Burmese people must fight bullets with bullets to restore their democratically elected government.
Min Tun dice:
မင်းတို့ အသုံးမကြလို့ဖန်းခံရတာ No planning No work ပလန်မရှိရင် အလုပ်မဖြစ် စိုသလို အကြမ်းဖက် သမားတွေကြောက်တာ တန်ပြန်အကြမ်းဖက်တာကို. လာဖမ်းတယ်အဖမ်းခံလိုက်တယ် ပိုတောင်ဖမ်းခံရမယ် သူတို့လာဖမ်းတဲ့ လမ်း ခေါ်သွားမယ့်နေရာ ဝင်စီးမယ့်အိမ် အားနည်းချက်သုံးနေရာရှိတယ် ကပ်ကြေးကိုက် ပလန်သုံးရင် အမေလီကန်ကြီးတောင် ဖင်ချီးတုံသွားမယ် မြန်မာပြည်မှာ ကားဗုံးခွဲးတာတို့ အသေခံခွဲတာတို့ မကြုံသေးလို့ အစ်လာမစ်တွေ စပိန် အင်ဂလန် ပြင်သစ် အမေရိကန်မှာ ခွဲးတာ အတုယူသင့်ပြီ ဒို့ဗမာတွေက သူများစောက်တင်းတုပ်ပြီး ကိုယ်လုပ်ရမယ်အချိန် ကြရင် ဖင်သီးသန်ခံတဲ့ကောင်တွေ
Ko Maung dice:
Ingin Mhwe dice:
CDM လုတ္တာ သိလို.​​ေတာင္ လိုင္းခန္း​​ေတြ​ေ​တာင္ဖယ္ခိုင္းတယ္ ခုဘာလို.ဖမ္းရျပန္တာလဲ တနိုင္ငံလုံးျဖစ္​ေ​နတဲ.ဟာ
Thet Pying dice:
Revolutionary Edutainment dice:
Zor Zaw dice:
Moe Moe dice:
Yuyu Cho dice:
ko thet ko thet dice:
ေစာက္ရမ္းေၾကာက္ေနပီ စကစေခြးေတြ ထမင္းဝေအာင္စားထား
Ver 30.000 UC KANLI KUZGUN SETİ DENEDİK SONUÇ ? PUBG MOBİLE